Musharaxii labaad oo isku soo sharaxay xilka Guddoonka Baarlamaanka Galmudug – Mareeg Online
Cabdullaahi Axmed Calasow Shiine oo ka mid ah Xildhibaanada Cusub ee Baarlamaanka Galmudug ayaa xalay Magaalada Dhuusamareeb kaga dhawaaqay inuu yahay Musharax Guddoomiyaha Baarlamaanka labaad ee Galmudug.
Isga oo xalay warbaahinta ku hadlay Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa uu si rasmi ah u shaaciyay inuu u tartamayo Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug, isla markaana waxaa uu noqonayaa Musharaxii labaad ee isu soo taagay xilkaas.
Sidoo kale Cabdullaahi Shiine ayaa Cod dheerd Xildhibaanada Cusub ee Galmudug uga socday inay siiyaan Codka kalsoonida Guddoomiyaha Baarlamaanka, isla markaana waxaa uu balan qaaday inuu la shaqeyn doono.
Sababta keentay inuu isku soo sharaxo xilka Guddoonka Baarlamaanka ayuu Cabdullaahi Shiine ku sheegay inay tahay in Baarlamaankii Koowaad ee Galmudug uusan qaban wax shaqo ah, taasina ay keenay in howlo badan ay Galmudug ka habsaantay.
Si kastaba Cabdullaahi Axmed Calasow Shiine ayaa waxaa uu kasoo jeedaa deegaanada beriga Galmudug gaar ahaan degmooyinka Galcad, Ceeldheer iyo Xarardheere ee dowlad Goboleedka Galmudug.
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Suldaanka Cusub ee Cuman (SAWIRRO)
DEG DEG:-Dagaal Goordhow ka qarxay Gobolka Galgaduud
Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle oo shir xasaasi ah u furmay + Sawirro